Ny stationery voalohany indrindra any New York | Vaovao momba ny dia
Sarin'ny afovoan'i Kate's Paperie
Ianao ve anisan'ireo mankafy manoratra amin'ny taratasy sy penina? Tianao ve ireo ravina sy taratasy voalohany? Raha eny ny valin'ireto fanontaniana ireto, any New York, dia ho hitanao ny toerana sasany azonao atao manitatra ny fanangonana penina sy peninao ary, miaraka amin'izay, mividiana fahatsiarovana am-boalohany ho an'ireo izay mankafy izany rehetra izany.
Ohatra, ny Fivarotana Art Brown Pen Izy io dia manana marika mifandraika amin'izany toy ny Cross, Caran d'Ache, Waterman ary Parker ary, ankoatra izany, ny magazay dia manome pensilihazo isan-karazany, pensilihazo mekanika, tranga ary andiana fanoratana ary roultera, na dia tsy hadinon'izy ireo aza ny penina taloha. Any amin'ny 2 West 45th Street no misy ilay fivarotana.
Ary koa, amin'ny sehatry ny fitaovam-pitaterana, ny Ny taratasy an'i Kate, magazay hahitanao izay rehetra ilainao mba hamonosana fanomezana amin'ny taratasy sy kofehy am-boalohany. Nisokatra hatramin'ny 1988, ny magazay dia manolotra fifantenana taratasy maherin'ny 4.000 isan-karazany sy kasety 1.500 5 manerantany. Izy io koa dia misy kojakojam-panoratana maro. Manana fivarotana 72 nozaraina nanerana an'i Manhattan, toy ny amin'ny XNUMX Spring Street eo anelanelan'ny Crosby Street sy ny Lafayette Street.
Toy izany koa, fivarotana fitaovam-pitaovana sy zava-kanto plastika iray hafa ao New York hanasongadinana ireo fitaovana Blick art, fivarotana iray any SoHo ary, amin'ny rihana voalohany, dia manome vokatra tsy misy farany toy ny kahie, penina, karatra, sary hosodoko sy rihana ambany manana safidy tsara amin'ny famatsian-asa tanana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Ireo stationery voalohany indrindra any New York
Cala Sa Tortuga any Lloret de Mar